Uncategorized – စာမျက်နှာ2– JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized (စာမျက်နှာ 2)
ကင်မရာပြီးတော့ဓာတ်ပုံအသင်းပစ္စည်းပြုပြင်ရေးကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေများနှင့်တာဝန်များနမူနာ
cams နှင့်ဓာတ်ပုံပြပွဲပစ္စည်းကိရိယာများ Restore နှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရုပ်ရှင်အပါအဝင်. Career Skills Requirement Adjust and validate precision of contact carriers , ရှပ်တာ function ကို, သို့မဟုတ်အလင်းကိုက်, ယခုအချိန်တွင်ပစ္စည်းကိရိယာများလျှောက်ထား. ဒုက္ခမှဝင်ရောက်ခွင့်အောင်မြင်ရန် devices များ Disassemble, လက်-tools တွေကိုအလုပ်သမား. ကင်မရာများပြောင်းနည်း, နောက်ဆုံးယန္တရားများ, ဥပမာအားခင်းကျင်းခြင်းနှင့်အမြင်တည်နေရာသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများ, …
self-သန့်စင်ပညာရေးဆရာများကယောဘဖျေါပွခကျြ / ဂျော့ဘ်ပြီးတော့ Duty နမူနာ
အများအားအလုပ်ရည်မှန်းချက်သို့မဟုတ်ဒီပလိုမာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောသူမြားမှတပါးလေ့ကျင့်ရေးပြရန်သို့မဟုတ်ပြောပြ. သင်တန်းများတခါတရံ Self-တိုးတက်မှု nonvocational ပါဝင်နိုင်ပါသည်,, နှင့် nonacademic ဖြစ်ကြောင်းကိစ္စရပ်များ. မေလညွှန်ကြားချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်သမားရိုးကျပညာရေးအသင်းအဖွဲ့အတွက်ဖြစ်ပျက်မပြုစေခြင်းငှါ. Career Skills Requirement Change educational products and teaching approaches to satisfy individuals’ …
Solderers And Brazers Job Description / တာဝန်နမူနာပြီးတော့တာဝန်တွေကို
Braze or solder elements jointly to gather material components that are designed, employing torch soldering metal, or welding unit and flux. Job Skills Prerequisite Soften and utilize solder along encompassing sides of workpieces to joints, လျှပ်စစ်သုံးပြီး, or soldering irons, gas torches – tools that is ultrasound. Examine appears regarding …
Jewel ကျောက်မြတ်နှင့်သတ္တုအလုပ်သမားများကယောဘဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့်တာဝန်ခံနမူနာ
စတိုင်, လီဆယ်, ညှိ, ပုံသေတပ်ထား, သို့မဟုတ်ရတနာဆုံးဖြတ်ရန်, ပလက်တီနမ်, မျှော, အခြားအရေးကြီးသတ္တုစပ်, သို့မဟုတ်လက်ဝတ်ရတနာ. စိန်ဓါးသွားနှင့်ကျောက်ပိုလန်ပါရှိသည်, နှင့်မှို၏တိကျသတ္တုများပုံသွန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်သူတွေကို, မှိုများတွင်ပစ္စည်းဖြန့်, လက်ဝတ်ရတနာများနှင့်ဆက်စပ်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်သို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်တန်ဖိုးရှိသောနှင့် semiprecious ကျောက်မျက်ရတနာ. အလုပ်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်
ကြမ်းပြင် Sanders ပြီးတော့ Finish ကိုယောဘဖျေါပွခကျြ / ခံမှု Template ပြီးတော့လုပ်ငန်းများ
သန့်ရှင်းသဲကျွန်းသစ်ခင်း finish ကို၏အကျီလျှောက်ထား, နှင့်ယူနစ် sanding မြေပြင်ခြစ်ခြင်းနှင့်ကြမ်းပြင်အသုံးချဖို့ပစ္စည်းများပင်မှ. ချောများအတွက်ယောဘသည်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်စစ်ဆေးမှုအခင်း. Sanders မြေဖို့လက်လှမ်းမမှီသန့်ရှင်းပြီးသဲမြေပြင်အနားနှင့်နေရာများ, ခြစ်အသုံးချဖို့, ကွန်ပျူတာ – ကော်ဖတ်, နှင့်ကြင်နာ Sanders. လမ်းညွှန်စာအုပ်စက်တွေကျော် sanding …
Psychiatric Aides Job Description / ဂျော့ဘ်ပြီးတော့ Duty Template ကို
Aid mentally impaired or emotionally upset clients, functioning under direction of healthcare and nursing staff. Might assist with everyday activities, lead people in informative and leisurely activities, or compliment sufferers to and from assessments and solutions. Individuals that are violent are restrained by may. Contains psychiatric orderlies. ယောဘသည်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက် …
ခွဲစိတ်လက်ထောက်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့တာဝန်ယူမှု Template ကို
reservation နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ခရီးသွားစာရေးယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Jobs and Duty Sample Produce and verify concerns regarding lodging or travelling, သို့မဟုတ်ထိုင်ခုံခရီးသွားမြှင့်တင်. ပေးထားသောနားနေဆောင်မှချက်ချင်းလူများနှင့်အိတ်ကိုအတည်ပြုရန်စေခြင်းငှါ,, တံတားတိုက်ခံ, သို့မဟုတ်လမ်းကြောင်း; ထောက်ပံ့ရေး 'passes, contact persons and communities to share with these of …
ကော်ဇောဆော့ဗ်ဝဲကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့လုပ်ငန်းများ
စာရွက်များသို့မဟုတ်အဆီးအတားအနေဖြင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ကော်ဇောထားလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့. တောင်ပေါ်က padding နဲ့ပိန်ကြမ်းပြင်အရင်းအမြစ်များကို. Career Skills Prerequisite Join tips of rug and seam ends wherever necessary, ချုပ်အားဖြင့်သို့မဟုတ်ကော်နှင့်အပူကော်ဇောဖြောင့်သုံးပြီးစံချိန်များအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်. အခွင့်အလမ်းတလျှောက်တွင် fit မှလျှော့ချရန်နှင့် Tone ကော်ဇော, …
ဓာတ်လှေကား installation နဲ့ repair ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Tasks ကိုထိုအ Duty Template ကို
စုဝေး, တောင်ပေါ်မှာ, restore, သို့မဟုတ်ခရီးသည်တင်ဓာတ်လှေကားသို့မဟုတ်ဓါတ်ငွေ့သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ကုန်တင်ထိန်းသိမ်းရန်, စက်လှေကား, သို့မဟုတ် dumbwaiters. အလုပ်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်း Build, voltmeters, နှင့်လမ်းဘေးစင်္ကြံထိန်းသိမ်းခြင်းကိုဆက်လက်, နှင့် dumbwaiters, မယ်, လက်အားနှငျ့ခှနျအားနည်းလမ်းများအသုံးချဖို့, နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဥပမာစာမေးပွဲဖြေဆိုမီးသီးများအတွက်အဖြစ် gadgets ပြ, ပုံသေတပ်ထား, နှင့် install, အမ်မီတာ. စာမေးပွဲပဲတပ်ဆင်ပစ္စည်းကိရိယာများမှ …
စာမျက်နှာ2၏ 56«12345 » 102030...နောက်ဆုံး »